Agabyada Shirkadaha Soo Saara ee Sicir-bararka Xirmooyinka, Stunt Airbag, Beeraha Biyo La Jirey ee Iibsiga | Joy Inflatable
Teendhooyin caadil ah oo hudheel la degi karo iyo barkad biyo la qaadi karo- Joy Inflatable.
Beerta biyo-la'aanta ah
Teendhada loo yaqaan 'igloo teent'
Teendhada adag ee adag
Teendhada xayeysiinta ee la soo koobi karo
Barkinta shilka oo jilicsan
Teendhada cube cube
Ciyaaraha la soo koobi karo
Xayeysiinta la soo koobi karo
Xadiiqadda Biyaha ee la Sidi Karo
0.9mm PVC tarpaulin daboolan vinyl
30 ° 30 m Miisaanka: 1500kg
JOY waa soo saare khibrad u leh baarkinka biyaha la kireysan karo, teendhooyinka la iskula wareegi karo iyo barkinta hawada oo istaagan ilaa 2001.
Waxyaabaha ugu waaweeyn waxaa ka mid ah isku-dhafka biyaha la-wareegi karo, barkadda biyuhu sabayn karaan, teendhada qarxisa, cayaaraha la isku-dari karo, barkinta hawada, xayeysiinta aan la-karin, iwm.
PVC Dibedda Dibedda Deme Camping Hotel hudheel xumbo ayaa lagu eegi karaa teendhada Cuntstal Cadday
PVC Hawada Dibedda ee Kaftanka Geme ee Geeda Naxqaynta Geeda ee loo eegayo teendhada Curtstal Crystal ee Iibka. Nadiifi soosaaraha The The The The The The The The The The The The The The Tender Teendhooyinka cakiran ee xumbada leh waxay leeyihiin codsiyo badan sida kaamamka, hudheelka, munaasabadaha xisbiga. Waxaan ku dhisan karnaa teendhooyinka kaamka ee cabirro kaladuwan, soo dhawow si aan noola soo xiriirno, teendhooyinka xubinta taranka ee iibka ah.
Kartida xargaha xarkaha ee xarkaha ah ee xarkaha ah
Ku-tagida xargaha xarkaha ee xasaasiga ah ee teendhooyinka ah teendhada. Farxad la soo koobi karo oo soo xumaanaya ayaa si fiican ugu iibiyay suuqyada caalamiga ah oo ay caan ku yihiin macaamiil badan. Waxay leedahay adeegsiyo badan, sida teendhada buufinka ee kaamamka, teendhada loo yaqaan 'cawska', iwm. Ku soo dhawow
Booska Bajka Barafka ee Barafka Baashadda Badbaadada
Barafka Barafka ee Barafka Barafka Barafka Hawada Hawada Hawada Hawada oo ku boodbooda + https: //www.jylinflat.com
Dibadda weyn ee dibedda ee teendhada ah ee ku soo dhaca teendhooyinka ayaa taxan tareenka
Gawaarida weyn ee bannaanka gawaarida gawaarida ah oo nadiif ah oo nadiif ah oo nadiif ah oo teendhada. Dibedda oo ah teendhada aan la arki karin oo leh istcimaal adag oo ku habboon iyo sifiican ayaa ah qalabka ugu horreeya ee bannaanka ee ay dadku u dooran doonaan kaamamka. Teendhooyin cad oo cad ayaa kuu oggolaata inaad ku raaxaysato qorrax ka soo baxa iyo qorrax dhaca gudaha. Farxad ayaa ku takhasustay noocyo badan oo ah teendhada dibedda ee la iskudaro, fadlan la xiriir!
Qorshaynta: Ogow shuruudaha macaamiisha iyo waxyaabaha ay ka walaacsan yihiin; Xaqiiji qaabka, midabka, cabirka, shaqeynta badeecada iyo miisaaniyadda macaamiisha; Marka loo eego baahida macaamiisha iyo waxyaabaha ay ka qabaan, kala hadal jihada suuragalka ama qabyada ah.
Xalka: Ka dhig sawirada 3 D inay kuxirantahay baahida macaamiisha; Go'aaminta xalka oo hagaajiso; Soo saar amar soo saar leh qoraal gaar ah oo ku saabsan xalka.
Waxsoosaarka: Sida ku xusan amar soosaarista si loo sawiro sawirka iyo soo-saarista; Lasoco jadwalka wax soo saarka oo u qaado fiidiyowyo laxiriira macaamiisha xaqiijinta; Tijaabi sheyga oo qaado fiidiyowga inta lagu jiro baaritaanka.
Iibka / Jawaab celinta kadib: U dir fiidiyowyada la xiriira oo la xiriir macaamiisha; Gaarsiinta; Bixi soo celinta booqashada xaaladda isticmaalka.
Dhamaan fiidiyowyadaan waa la toogtay markii aan tijaabino badeecada la isku gudbin karo kooxdeena toogashada, ama jawaab celinta macmiilahayaga oo laga soo qaaday goobta. Ugu horreyntii waxay ka tarjumaysaa qaabka, qaab-dhismeedka, waxqabadka, midabka iyo adeegsiga alaabadayada. Sidaas ayaanay noogu habboon tahay inaannu horumar samayno….
Guangzhou Joy inflatable Limited waa warshad ku takhasustay barkadaha biyaha la isdiyaari karo, teendhooyinka la karri karo iyo barkinta hawada oo la istaajin karo. Waxaan ku siin karnaa xal gaar ah oo loogu talagalay goobtaada. Tani waxay noqon kartaa iskudarka wax soo saarka ee shaqsi ahaaneed ee kugu habboon cabirradaada gaarka ah, miisaaniyadda iyo cabirka. Khibradeena 10-kii sano ee la soo dhaafey 50-ka waddan, waxaan ognahay golayaasha macno samaynaya marka loo eego madadaalada iyo howlgalka.
Alaabooyinkeena ayaa si balaadhan looga isticmaalaa meelaha madadaalada, bandhigyada, kasbashada, loolanka ugu dambeeya ee gudaha iyo dibedda, iyo jardiinooyinka biyaha iwm, madadaalada / raaxada / cayaaraha / meelaha dalxiiska iyo wixii la mid ah. Waan ognahay, wadada horay u jirtay, waxaa jira fursado iyo caqabado, tartamo iyo iskaashi. Laakiin waxaan aaminsanahay in aqoonta cusub iyo teknolojiyaddu ay door muhiim ah ka ciyaari doonaan dariiqa horumarka joogtada ah iyo hal-abuurka,
waxaan hubin karnaa inaan soo bandhigi karno badeecado tayo leh oo tayo sare leh, oo ku saleysan shaqaalahayaga khibradda leh, mashiinada horumarsan iyo nidaamka xakamaynta tayada tayada adag.
Nala Soo Xiriir Hel Qaabka Qaab-dhismeedka
Ku takhasusay teendhooyinka la isku qaadi karo iyo is-qurxinta barkadaha biyaha sabeeya. Waxaan bixinaa caadooyin kala duwan sida midabka, cabbirka, qaabka, qaabeynta muuqaalka, farshaxanka, daabacaadda, iwm Iyada oo la adeegsanayo SGS, CE, UL iyo shahaadooyinka xirfadeed ee kale ee alaabada iyo alaabada.